Epoxy nrapado F104 maka aluminium n'ụgbụgbọ mmanụ a panelụ, China
Epoxy na-agbakwunye F104 maka aluminom n'ụgbụgbọ mmanụ abụ
BEECORE epoxy nrapado F104 bụ a abụọ-akụrụngwa, ụlọ okpomọkụ na-agwọ, elu arụmọrụ bughi nrapado. A na-etinye ya maka ogwe ụgbụgbọ mmanụ a aluminumụ aluminom. Ọ nwere ike nkekọ dị elu, ike ịkwa osisi na enweghị mmiri mmiri ọwụ. Ọ dịghị peculiar isi na oghom mmetụta na gburugburu ebe obibi na ọrụ.
● Epoxy nrapado F104, ọ mere nke toughening gbanwetụrụ epoxy resin agwakọta na polima ihe. Okpukpo Thixotropic, nke adighi adighi nma, ndu nkpuru. Ngwaahịa a nwere uru doro anya nke ịgwọ ọrịa dị ala.
Mgbe a gwọchara ya, ọ nwere ihe ndị magburu onwe ha nke ike dị elu, mmetụta na-eguzogide, nkwụsị na-eguzogide ọgwụ, usoro ihe ọkụkụ na eletriki.
Cost costrụ ọrụ dị elu
● Mmiri na okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ
Biko mee ka ogwe aka mejupụtara ma mezie, wepụ unyi, ajịrịja, mmanụ na adịghị ọcha ndị ọzọ ma kpoo.
● Tupu iji, biko homogenize akụrụngwa A na B iche iche mbụ, na zuru mix juputara na-eso A: B = 2: 1 ruru. Na-etinye nrapado na azụ panel, fractioning azụ na-apụta na mma, ka nrapado homogeneous nkesa.
Igwe igwe （BHM-SM-A Series）
Onyinye ọkụ na-agbanye ọkụ (ogwe) （BHM-CH-A100T）
Onyinye ịpị igwe oyi (Panel)